Ingeosolum ikhupha i-newsletter ye-Geofumadas
Ingeosolum ivula iphephandaba
Kwiinyanga ezimbalwa ezedlule inkampani Ingeosolum iqalise i-bulletin ye-elektroniki apho bathetha khona into eyenzekayo kwi-Engineering, kwaye ngokukodwa i-geotechnics. Le yinkampani yokuqhuba Geo5, ukususela kwi-Software FINE, apho ndazihlaziya ngenye ixesha.
Kule nkcazo yesibini babhekiselele kwiimbali ezimbalwa ezenzeka phakathi:
VIII Golf Tournament yeSikolo soBugcisa boBugcisa beeNkonzo zoLuntu kwiCIT ngexesha lomthendeleko womqeshi waseSanto Domingo de la Calzada, e-Olivar de la Hinojosa Golf Course.
Ikhosi yamazwe ngamazwe eGeotechnics kunye neTunnel Engineering usebenzisa i-3D FEA software ye-Midas GTS, eyenziwa eDelft, e-Netherlands. Phakathi kwezicelo eziye zaqwalaselwa kule khosi zibandakanyiwe:
Izakhiwo zokuxhomekeka komhlaba
Uhlalutyo lokuhlalutya nokuhlanganiswa
Ngaphandle koko, le ncwadana iquka inqaku elifutshane kwisiseko ngokusebenzisa i-microject injection micropiles.
Ukufumana i-newsletter, kufuneka ubhalise xa ukhupha wakho software yokubonisa, okanye uqhagamshelane nolunye lweefowuni zakho zokuqhagamshelana.
Post edlulileyo«Edlulileyo Guqula imifanekiso ukuya kwi vector
Post Next I-PC enkulu, igazini elikhuluOkulandelayo "